Vaovao - Famaritana famindrana mafana
Ny taratasy famindrana mafana dia antsoina koa hoe taratasy vita amin'ny pirinty. Ny taratasy famindrana mafana dia sosona loko fotsy eo ambonin'ny tampon'ny taratasy ifotony, voafintina sy voahodina, mizara roa sy lafiny roa. Nampiasaina indrindra ho an'ny fanontana offset, fanontana an-tariby tsara, toy ny rakikira sary zokiny, kalandrie, boky ary gazety.
Ny fametahana tena dia karazana fitaovana mitambatra, izay vita amin'ny taratasy, sarimihetsika na fitaovana manokana hafa toy ny taratasy tarehin-tarehy, ny lamosina nopetahany taratasy adhesive, silipo nopetahany fiarovana ho taratasy farany. Aorian'ny fanontana, fanodinana maty ary fanodinana hafa amin'ny marika vita vita. Mampiasa taratasy famindrana hafanana ho toy ny marika adhesive miorina amin'ny taratasy tarehy izahay, antsoina hoe labozia fametahana taratasy famindrana hafanana.
Amin'ny ankapobeny, ny ora fitahirizana ny mari-pamantarana hafanana dia 2 taona eo ho eo, tsy dia voakasiky ny mari-pana. Hasiana kofehy famindrana hafanana hanontana ireo marika.
Sehatra fampiharana: fivarotana lehibe, fitantanana lisitra, mari-damba, tsipika famokarana indostrialy. Mety amin'ny fanontana miloko semi-manasongadina amin'ny fampiroboroboana ny varotra sy ny indostria. Ny fampiharana mahazatra dia misy labozy kosmetika, marika pharmaceutika ary mari-pamantarana indostrian'ny sakafo. Azo apetaka amin'ny ankamaroan'ny velaran'ny substrate sy ny faritra tsotra, ao anatin'izany ny baoritra, sarimihetsika plastika.
Amin'izao fotoana izao, ny marika famindrana hafanana dia ampiasaina amin'ny fonosana mazava. Ny fonosana dia mety misy soratra mifamatotra na mifangaro amin'ilay fonosana. Ireo dia mety mitondra vidiny, kaody barcode, fanondroana ny UPC, fitarihana fampiasana, adiresy, dokam-barotra, fomba fahandro sns. Izy ireo koa dia azo ampiasaina hanampiana hanohitra na hanondroana fanodinkodinana na familiana pilotra.
Ary ny mari-pamantarana mailaka dia mamaritra ny mpandray anjara, ny mpandefa ary ny fampahalalana hafa mety ho ilaina amin'ny fitaterana. Fonosana rindrambaiko maro toy ny programa fikirakirana teny sy programa mpitantana fifandraisana no mamokatra mari-pamantarana fandefasana mailaka namboarina avy amina data napetraka izay mifanaraka amin'ny fenitra paositra. Ireo labels ireo dia mety misy koa ny barcode chiffres sy ny fepetra fitantanana manokana hanafainganana ny fandefasana.